26 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ 26 2019
Antalya လေဆိပ် Radar- အခြေခံ. စည်းလုံခြုံရေးစနစ်
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin, ဝန်ဆောင်မှုသို့ Antalya လေဆိပ် Radar-အခြေခံပြီးကြောင်းပတ်လည်အတိုင်းအတာလုံခြုံရေးစနစ်ကြေညာခဲ့သည်။ (dhmihkesk ရဲ့ @) ကိုဘာသာရပ်အပေါ်တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်မှ General Manager Sharp ကထိုအမျှဝေစေသည် [ပို ... ]
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ပြန်လည် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းစနစ်
affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏ Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်နှစ်ဦးစလုံး terminal ကိုအရောင်းအများ၏မျက်နှာများပေါ်တွင်အပြုံးများပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်ကတည်းကနိုင်ငံသားသူတို့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အတူလုပျသငျ့တယျ, Inc ulaşımpark။ နောက်ဆုံးတွင်မြို့တော်မြူနီစီပယ် terminal ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှောက်သွားချင်ခဲ့တယ်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းအတွက်ရေလွှမ်းမိုးမှုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်, [ပို ... ]
ကုန်းပြင်မြင့်ယာဉ်များမှလူ Antalya တဲ့ Metropolitan 19 ထောင်နဲ့ချီတဲ့
နိုင်ငံသားများအကြီးအတိုးဖေါ်ပြခြင်းနေသောဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ကုန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း '' လေးအချိန် '' မှလှူဒါန်းခဲ့သောသူ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ စုစုပေါင်းအချိန်နှင့်အတူ 19 555 တထောင်ကလူကဒီနွေရာသီနွေဦးသို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာန [ပို ... ]
Taurus ကတ္တရာသုံး Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေလှုံ့ဆော်ပေး
အားလုံးခရိုင်တစ်ပြိုင်နက်ထွက်သယ်ဆောင်အကျင့်ကိုကျင့်လမ်းခင်း Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်, Taurus ခရိုင်နှင့်အတူအပြည့်အဝလွှဲထဲမှာရောက်နေပါတယ်။ feverishly တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တိုတောင်းသောအလုပ်အတွက်စေ့စပ်အလုပ်လမ်းခင်းအဖြစ်အသုံးပြုကျေးလက်ခရိုင်စမ်းအတွက်နိုင်ငံသားများအားဖြင့်နွေရာသီလအတွင်း [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç, Derevenka Viaduct နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းမကြီးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာတွေ့ရှိ
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ မြို့သူမြို့သား Derevenka Viaduct ၏အရေးအပါဆုံးလမ်းတဦးဖြစ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအလုပ် site ကိုဆန်းစစ်တံ့သော Mamdouh Büyükkılıç'ın။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç, viaducts နှင့် Access လမ်းများအဆိုပါ 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံနေ့သည်အထိပြီးစီးလိမ့်မည် [ပို ... ]
အခွန် Gebze Metro န်ကြီးဌာနငါ့ကို Be သလော
စက်မှုဝန်ကြီး CHP ပါလီမန်ကော်မရှင် Sözcüs ကို, အ Gebze Metro စက်မှုဝန်ကြီးဌာနများအတွက် CHP ပါလီမန်ကော်မရှင်များ၏အစီအစဉ်မှတူရကီ၏ရန်းအမျိုးသားညီလာခံ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏အပြောင်းအရွှေ့ကဆိုပါတယ်ထမ်းသော Kocaeli လက်ထောက် Tahsin Tarhan, Sözcüs ကို, Kocaeli လက်ထောက် Tahsin Tarhan, ဆောက်လုပ်ရေး၏အပြောင်းအရွှေ့ဝန်ကြီးဌာန [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, Nevsehir တှငျကငျြးပခဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက, Consultation နှင့်အကဲဖြတ်ဧရိယာ၏အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေသခံအစိုးရ Mehmet Özhasekiတာဝန်ခံထဲမှာ AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌအစည်းအဝေးကိုလည်းဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ [ပို ... ]
Kayseri ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 50 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME), မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်သည်။ သြဂုတ်လ 26 2019 အတွက်လုပ်ကိုမဆိုစသောအပြောင်းအလဲတရားဝင်ဖြစ်ဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည့်နေ့ရက်မှနှစ်နှစ်အကူးအပြောင်းအခကြေးငွေ။ အသစ်ကအမြောက်အများတည်းဖြတ်ရေးအတွက် [ပို ... ]
Başiskele Istiklal Caddesi ပြန်လည်ဆန်းသစ်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်မွို့၌နေဆဲဖြစ်သည်။ Istiklal Street မှာပြုသောအမှုဤအခြေအနေတွင်Başiskeleခရိုင်Doğantepeရပ်ကွက်လန်းဆန်း superstructure အလုပ်အတွက်။ သိပ္ပံရေးရာလမ်းခင်း၏ဦးစီးဌာန 700 ၏မီတာကဆောင်ရွက်လမ်းအကျင့်ကိုကျင့်၏မူဘောင်အတွင်း [ပို ... ]
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ချောချောမွေ့မွေ့ခှဲဝေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏33 900 အသွားအပြန် shaped ခြေလျင်အပိုင်းအတွက်ပူကတ္တရာအလုပ်ကိုပြီးစီးခဲ့ပါသည်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စီးတီးဆေးရုံအားဖြင့်ပြန်တမ်း။ ယေဘုယျအား, မီးယပ်ကလေးသည်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံ, နှလုံးသွေးကြော, ကင်ဆာပညာရပ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့် [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန '' 45 နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်လုပ်နေဆဲစီမံကိန်းများ '' ကြေညာ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုယခုနှစ်စီစဉ်ထားစီမံကိနျးအတှကျဆောက်လုပ်ရေးဘတ်ဂျက်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သူသည်အမျိုးမျိုးသောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစီမံကိန်းများကိုနှစ်ပေါင်း 45 ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏န်ကြီးဌာန, တရာစီမံကိန်းများကိုကျော်ရာအရပျကိုယူ။ [ပို ... ]
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ-မီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထွေထွေဥက္ကဌ Ergun Atalay Selected ခံရပေမယ့်
တူရကီမီးရထားအလုပ်သမားများ (မီးရထား-စီးပွားရေး) ပြည်ထောင်စုအထွေထွေ Ergun Atalay သမ္မတမှပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ Söğütözü 11 အတွက်ဟိုတယ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အတိတ်၏အဖွင့်ပွဲနေ့၌အထွေထွေညီလာခံမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း Atalay ဥက္ကဋ္ဌကြောင်းဖော်ပြသည်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းနှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းလုပ်သောအမှာစကားပြောကြားသည်။ [ပို ... ]
Trabzon ဥပဒေရေးရာ Boulevard အတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်
ဝန်ကြီး Turhan, သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ Ataturk ဧရိယာမှာကျင်းပတဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် Trabzon သမ္မတအာဒိုဂန်ရဲ့ဂုဏ်အသရေ, အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရဲအရာရှိအလီ Celebi သနားတျောမူပါဝင်ရောက်ဖို့အာဇာနည်, သူ့မိသားစုသည်းခံခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုတူရကီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရန်၎င်း၏ဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဇာတိမြေ left [ပို ... ]
ကုလသမဂ္ဂ Ro-Ro, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှ DFDS Process ကိုေူပာင်းလဲရေးကို, Troy နှင့်အတူဒုတိယအချက်ကဧရာ Seaways သင်္ဘောလွှတ်တင်
တူရကီရဲ့အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီကုလသမဂ္ဂ Ro-Ro Ro-Ro, ဥရောပရေကြောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကြီး dfds'y အမှတ်တံဆိပ်အသွင်ပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဧရာ DFDS ro-ro သင်္ဘောများတူရကီဖို့ပိုဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ဆိပ်ကမ်း Pendik ၏နာမကိုအမှီ DFDS မှာကျင်းပရှည်လျား 237 မီတာအတွက်ခမ်းနားသင်္ဘော [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကနေ 135 သန်းယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ DHL Express ကို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမြန်လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ DHL Express ကိုတူရကီထိပ်တန်းမန်နေဂျာ (CEO ဖြစ်သူ), Claus Lassen "အစ္စတန်ဘူလ် Airport've ပြုသောအမှု 135 42 သန်းယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တထောင်စတုရန်းမီတာဧရိယာရှိသည်။ " သူကဆိုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမြန်လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ DHL Express ကို [ပို ... ]
Mersin ဆိပ်ကမ်းအော်ပရေတာ MIP နာရီ 178 လှုပ်ရှားမှုကဆောင်ရွက်မှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုကွန်တိန်နာသင်္ဘောစစ်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2018 ခုနှစ်တွင် Mersin ဆိပ်ကမ်းအော်ပရေတာကုမ္ပဏီ MIP စံချိန်အခြေချပထမဦးဆုံးဌာန၌ကွန်တိန်နာ throughput အတူကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့် [ပို ... ]
Diyarbakir ဘူတာရုံဉမင်လိုဏ်ခေါင်းသုတေသနပလက်ဖောင်းနီးပါးရုပ်ရှင်များတွင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြောက်ရွံ့နေကြသည်မဟုတ်။ နိုင်ငံသားများဘူတာရုံ Peron ဖြတ်သန်းဝံ့ဖြစ်ကြသည်။ Diyarbakir TCDD ဘူတာရဲ့ပလက်ဖောင်းရှင်းလင်းခြင်းမှပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ နေ့တိုင်းအိမ်သို့သွားဖို့အသုံးပြုလူရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူနှောင်ကြိုး Akdeniz ခရိုင် [ပို ... ]
Thessaloniki Alexandroupolis လေ့လာရေးခရီးအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားအာဘော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော!
Thessaloniki-Alexandroupoli (Alexandroupoli) ရထားကညာခရီးစနေနေ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်မတော်တဆမှုသုံးစွဲစေသည်။ Thessaloniki-Alexandroupolis ရထားမြောက်ပိုင်းဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်သမီးကညာကိုခရီးနှစ်ခုကျွဲသို့ပျက်ကျခဲ့စေသည်။ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းမှဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်တိုက်မှုအပြီးသတင်းAzınlıkçaလွှဲပြောင်းအဆိုအရဆုံးဖြတ်ရန် [ပို ... ]
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအလုပ်သမားများအရစ်ကျ Make ဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားပါလိမ့်မည်
အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံမှတူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်း: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာစာတိုက်၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအမြဲတမ်းလုပ်သားများကိုစုဆောင်း2အဖြစ်ဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။ တူရကီစီးပွားရေးကောင်စီ 26.08.2019 ၏ website တွင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်အတူန်ထမ်းခေါ်ယူမှုကြော်ငြာတွေ - 30.08.2019 ရက်စွဲများ [ပို ... ]
rayhab 26.08.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
ပိုက်လိုင်းYaptırılacaktırBAŞKENTRAYစခန်းများကာလအပိုင်းအခြားကို Maintenance, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပျက်ကွက်ဖြစ်ရပ်မှန်MühadelKöseköyဘူတာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဂိုဒေါင်ဧရိယာတွင် CCTV ကင်မရာလုံခြုံရေးစနစ်တပ်ဆင်စီးပွားရေးအလားတူမီးရထားသတင်း၏အလုပ်ဖြစ်ရန်နှင့်အကျိုးစီးပွားအခြား haberlerrayhab မည်အကြောင်းဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
Toyota ၏ Hybrid ကိုကားလွန် 14 သန်းအရေအတွက်
ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံအများစုက sporty Hyundai တာက်ဆန်?